बेल खानु स्वास्थ्यका लागि अचुक ओखती ! यी रोगहरु छन् भने खानुहोस बेल रोग च्वाट पार्छ «
बेल खानु स्वास्थ्यका लागि अचुक ओखती ! यी रोगहरु छन् भने खानुहोस बेल रोग च्वाट पार्छ
बेललाई संस्कृतमा श्री फल भनिन्छ । यसका पातहरूमा एउटै पत्र डाँठमा तीनवटा पातहरू छुट्टिएका हुन्छन् र यसा लाई बेलपत्र भनिन्छ। तीनवटा पातमध्ये बीचको पात केही ठूलो हुन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार याे बेलपत्रलाइ भगवान शिवलाइ चडाउने गरिन्छ ।
गर्मीयामको मौसमी फल बेललाई अनेक रोगको उपचारमा समेत प्रयोग गरिन्छ । आयुर्वेदमा बेललाई स्वास्थ्यप्रद फल मानिएको छ । पाकेको बेल रुचिकर, मधुर, पाचक तथा शीतल फल हो ।
– पेटसम्बन्धी विकारमा बेल खानु निकै लाभदायक मानिन्छ । यसमा एन्टिफंगल, एन्टिप्यारासाइटिक गुण हुन्छ, जो पाचनका लागि धेरै लाभदायी हुन्छ । यति मात्र नभई, बेलमा रेचक (ल्याक्जेटिभ) गुणसमेत हुन्छ । यसको नियमित सेवनले कब्जियत जरोदेखि नै समाप्त हुने मान्यता छ ।
– यो मधुमेह रोगीका लागि समेत फाइदाजनक मानिन्छ । यो फलको पातलाई पिसेर रस खानाले मधुमेहमा राहत मिल्ने मान्यता छ । बेलमा धेरै प्रकारका पोषक तत्त्व हुन्छन् । यी पोषक तत्त्वको सहयोगले मृगौलाको विषनाश (डिटक्सिफाई) गरेर शरीरको फोहोर बाहिर निकालिन्छ ।
– यसमा बिटा क्यारोटिन पाइन्छ । यसले कलेजोलाई स्वस्थ राख्न सघाउँछ । यति मात्र नभई, बेलमा राइबोफ्लेभिन र थाइमिनजस्तो भिटामिनसमेत पाइन्छ । यो भिटामिन कलेजोका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
– एक सय ग्राम बेलमा नमी ६१.५ प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट ३१.८ प्रतिशत, फाइबर २.९ प्रतिशत, प्रोटिन १.८ प्रतिशत, बोसो ३ प्रतिशत, फोस्फोरस ५० मिलिग्राम, भिटामिन ‘सी’ २ मिलिग्राम, क्याल्सियम ८५ मिलिग्राम, आयरन २.६ मिलिग्राम हुन्छ । यस्तै सय ग्राम बेलमा १ सय ३७ क्यालोरी ऊर्जाका साथै केही मात्रामा भिटामिन ‘बी’ समेत पाइन्छ ।